အောက်သွေးတိုးစေတဲ့ အစားအစာများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
1. ဆိုဒီယမ်ဓာတ်မြင့်မားစွာပါ၀င်သော အစားအစာများ
ဆိုဒီယမ်မြင့်မားစွာပါ၀င်သောအစားအစာများ (အငန်ဓာတ်လွန်ကဲစွာပါ၀င်နေသောအစားအစာ) များကိုစားသုံးခြင်းဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကိုမြင့်တက်စေပြီး လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊ ကျောက်ကပ် ဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တနေ့လျှင် ဆိုဒီယမ် 1500mg ထက်ပိုမစားသင့်ပါဘူး။
2. ဆိုဒါအချိုရည် အမျိုးမျိုး
လန်ဒန်မှသိပ္ပံပညာရှင်များ၏ လေ့လာချက်များအရ အချိုရည်များသောက်သုံးခြင်းဟာ အပေါ်သွေး (SBP) နှင့် အောက်သွေးလို့ခေါ်တဲ့ (DBP) နှင့် မျိုးလုံးကို မြင့်တက်စေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖရက်တို့စ်၊ သကြားဓာတ်နှင့် ဂလူးကိုစ် သကြားဓာတ်ပါ၀င်သော အစားအစာများကြောင့်လည်း သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေဆာနေချိန်တွင် အချိုရည်သောက်သုံးခြင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပါ။
သူကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်လုံး၀မကောင်းပါဘူး။ လေ့လာမှုများအရ ပြည့်၀ဆီပါ၀င်သော အသားစားသူတွေဟာ ငါးစားသုံးသူတွေထက် သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘ၀နှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ သွေးတိုးရောဂါမဖြစ်အောင် မွေးကင်းစကလေးအရွယ်မှစ၍ အသက် 15 နှစ်ထိ ပြည့်၀ဆီစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။
အသင့်စားအစားအစာတွေမှာ ဆိုဒီယမ်၊ သကြားနှင့် ပြည့်၀ဆီတွေ ပါ၀င်တာကြောင့် အောက်သွေးလို့ခေါ်တဲ့ (Diastolic Blood pressre) ကိုတက်စေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အသင့်စားအစားအစာတွေမှာတောင် သွေးပေါင်ချိန်တက်စေသောပစ္စည်းတွေ ပါ၀င်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင့်စားအစားအစာများ စားသုံးခြင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပါ။